ko htike's prosaic collection: Watch it, before you go to vote and, Would you say "YES" to constitution?
Watch it, before you go to vote and, Would you say "YES" to constitution?
Posted by ကိုထိုက် at 17:42
wow.. very good translation and high quality video, I was even suprised to see such awesome movement by the Burmese peacefully against the regime. I am proud of Being Burmese Walk On, if we all walk on together, the regime will not last..
26 April 2008 at 20:57
ကိုထိုက်ရေ ကျွန်တော်ဘလော့မှာ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ် .. ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒါမျိုး များများလုပ်နိုင်မှသာလျင် နိုင်ငံတကာကို ပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ သူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုကြမ်းတမ်းစွာ ကိုင်တွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို Every Frame Counts .. အားလုံးသိကုန်ပြီ။ အခုခေတ်ဟာ မီဒီယာခေတ်ကြီးဆိုတာ နအဖကို ပြောချင်တယ်။ ၈၈ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ နအဖ သိစေချင်တယ်.
26 April 2008 at 21:31
အဲဒီဗွီဒီယိုနဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်တွေကို သတိပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် မိပါတယ်။
27 April 2008 at 02:37
ကိုထိုက်ေ၇၊ ကောင်းတယ်ဗျာ။ အဖိုးတန် မော်ကွန်းတွေ အဖြစ် တင်ကျန်၇စ် မယ့် အ၇ာတွေပါ ခင်ဗျာ။
We must never forget this. NEVER!
28 April 2008 at 02:55
Real နဲ့ Dn Ld ပြီး YouTube မှာတင်ကြည့်သေးတယ်
Speed က နှစ်ဆဖြစ်သွားပြီး ကာတွန်း လိုဖြစ်နေတယ်
bravo ko htike!!! of couse, we all MUST show we dare to CROSS!!!
25 March 2009 at 14:01
情色文學論壇aa片免費看影片A片aa的滿18歲影片383影音城辣妹視訊 影音聊天室色色網ut聊天室環球辣妹聊天室成人漫畫論壇8dgo免費視訊聊天 加入免費試玩8comic無限動漫9k躺伯虎聊天室美樂蒂情色網情色 視訊聊天室85cc免費影城85cc.net免費影城七厘米影音娛樂網在線即時收看77p2p影片網7788成人論壇視訊交友網66av視訊網 聊天室聯盟666成人78論壇辣妹視訊 免費聊天哈啦聊天室5278.cc論壇5278影片網我愛78論壇5278論壇情人視訊網520sex免費a片網聊天室080免費 視訊 美女 聊天室520sex免費情色小說網情色dvd免費下載3a情色網小魔女免費影片激凸成人論壇愛愛貼圖貼片區20jack.com成人電影院2008真情寫真台灣第一貼圖區18禁小說夜未眠成人絕色影城情色交友聊天小站18p2p論壇18jack.com 免費a片下載網寂寞美女十八招禁區18禁遊戲168論壇華人色片站123456免費電影sm聊天室百性成人娛樂網100one百萬成人貼電影麗的色情遊戲原住民聊天室080 苗栗人聊天室中部人聊天室一夜情聊天室豆豆聊天6k聊天館080 尋夢園聊天室聯盟080 聊天室 6k視訊交友907390204貼圖區0204movie - 18成人影城0204 成人台灣貼圖區007色色網日本成人短片金瓶影片交流區情色網站18成人圖片亞洲成人圖片區av片-sex貼片av127一葉情貼圖片區嘟嘟圖片網百分百成人圖片yymp3 音樂網站一夜情視訊聊天室無碼女優 - YUKI月光論壇浪漫月光論壇維克斯討論區成人免費視訊聊天蕃薯藤交友msn情色聊天室自拍美女聊天室無限高潮Y3K - 明星貼圖區洪爺成人圖片情色故事成人無碼情色貼圖交流板18進不禁的影片xvediox 免費成人頻道